Ihe niile gbara ọchịchịrị ma dịkwa iche iche gbasara usoro ahụ na Warhammer Quest: Silver Tower | Gam akporosis
Nchọgharị Warhammer: Ala ndị agha na-atụgharị na Silver Tower na mmalite ụwa
Manuel Ramirez | | Egwuregwu gam akporo
Anyị nwere ike ikwu nke ahụ Nchọgharị Warhammer: Silver Tower na-awụda na freemium bandwagon site na ọgụ a siri ike nke anyị ga-eji tụọ njem anyị niile.
Anyị na-ekwu banyere freemium, ọ bụ ezie na eziokwu ahụ na ọ na-eme ya ntakịrị ihere n'ihi na "dobe" na mgbasa ozi ma ọ bụrụ na anyị chọrọ okpukpu abụọ ụgwọ ọrụ; N'adịghịkwa ka aha ndị ọzọ, lee, ị ga-achọrịrị nhọrọ iji hụ mgbasa ozi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ dịghị akpali akpali dị ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke egwuregwu, ka anyị bịaruo ya nso!
1 Warhammer uzo dabeere ọgụ
2 Warhammer Quest: Silver Tower na ọgụ ya
3 You ga-ada ma ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe
4 Uche ederede
4.1 Nke kacha mma
4.2 Kasị njọ
5 Budata ngwa
Warhammer uzo dabeere ọgụ
Nchọgharị Warhammer: Silver Tower na-atụle n'obi ya dị ka otu n'ime ndị kasị mma "ndị nwenụ" nke dị adị kemgbe. Nke ahụ bụ, ọ nwere eluigwe na ala ya iji na-eri nri iji nwee ọnọdụ ahụ zuru oke maka ụdị egwuregwu a nke anyị chọrọ ịmata akụkọ ihe mere eme nke onye ọbụbụ ma ọ bụ n'ihi na akụkụ ahụ nke ala ndị ahụ furu efu.
N'ezie ọrụ anyị bụ inwe ọganihu site na Silver Tower, nke ajọ Gaunt Summoner na-eche nche. Anyị ga-eche ụdị diabolical niile dị iche iche ihu ọdịdị dị ka Acolytes, Tzaangors ma ọ bụ Daemons. Nke ahụ bụ ịsị, anyị nwere ihe ngosi ahụ rọrọ nrọ maka egwuregwu nke ọ bụrụ na ekwentị gị nwere ike gbaa ya, ị ga-enwe egwuregwu nwa oge.
Anyị na-ekwusi ike ọzọ na anyị na-eche egwuregwu ndị na-achọ ọtụtụ ihe site na igwegharị anyị. 95% nke oge mkpanaka gị enweghị ike ibudata egwuregwu ọ bụghị n'ihi na ọ kachasị nke kachasị mma, ọ bụ n'ihi ekwenti gi enweghi ngwaike ezu, ya mere, ọ gaghị adị njọ ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ amalite ikwusa ihe kacha nta ka anyị wee nwee ike ịhụ ha na ihu nnabata mgbe anyị malitere egwuregwu ha.
Warhammer Quest: Silver Tower na ọgụ ya
Egwuregwu Warhammer nke dị na ya ntughari na-ebute agha na-ebute anyị na eserese site na nke anyị na-enwe ọganihu site na usoro nke ọkwa. Nke ahụ bụ, anyị nwere ike ịhụ nhụsianya dị anya site na nkọwa ya niile, iji banye n'ọkwa dị iche iche wee nweta igbe mkpọsa ndị ahụ na-eduga anyị inweta ihe na ihe ndị ọzọ.
Ọ dịghị ihe ọhụụ na akụkụ ndị a na nke ahụ na-egosi na Warhammer Quest: Silver Tower chọkwara ịgbakwunye freemium. Anyị ga-enwe na ngụkọta 200 agha na 25 pụrụ iche gburugburu gini bu kwa map ndia. Maka nke a, anyị ga-eji ọtụtụ narị ngwa ọgụ, ngwa na akụrụngwa wee si otú a daba na atụmatụ ndị ahụ pụrụ iche maka ngwa agha na ngwa agha ndị ahụ.
Nke ahụ kwuru, site na aha a anyị ga-enwe ike ịgbapụta onwe anyị ntakịrị site n'aka ọtụtụ ndị ọzọ na gam akporo, ebe anyị na-eche ihu saga nke nwere ya ọkụ na onyunyo ha n’ụzọ maka igwu egwu site na mkpanaka. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere egwuregwu zuru ezu ebe a iji mee ka anyị nwee obi ụtọ.
You ga-ada ma ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe
N'ezie, ọ bụrụ na ị bụ onye onye na-eso saga ị ga-ada megide Warhammer Quest: Silver Tower, ebe ọ bụ na ọ nwere ihe niile gbara ọchịchịrị aka, imewe na ikuku iji mee ka egwuregwu ọ bụla nwee ahụmịhe ndị Fans ga-ama etu esi enwe ekele. N'ebe a, eziokwu bụ na ha arụ ọrụ ya ọ bụ ezie na ọ nwere nyocha na-adịghị mma, na akụkụ nke ndị nwere mobiles na-anaghị atụfu ihe zuru oke, ọ bụ mbata maka gam akporo.
Ọchịchọ Warhammer: Silver Tower ọhụụ na-emetụta anyị na-ahapụ atụmatụ nke ndị dike ya, dị ka ụfọdụ na-atọ ụtọ. N'ebe a, ha emeela ka anyị nwee ezigbo nkọwa na-ewetara anyị ezigbo ahụmịhe ọhụụ na ahụmịhe nke anyị si nwee ike igwu na Galaxy Note 10 + anyị; ka anyị na-eche maka MMO nke Warhammer maka mkpanaka.
Yabụ ugbu a ị nwere ike ịga na-agagharị na nbudata nke Warhammer Quest: Silver Tower na ọ bịaruokwa taa, ka enye ya.
Ihe kachasị mkpa nke Warhammer zoro n'azụ egwuregwu egwuregwu ọhụụ ya. Dị mkpa maka ndị Fans ya na ọnọdụ gbara ọchịchịrị na pụrụ iche.
Usoro edemede: 7,1
Ndị dike dị egwu
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị nwetara
Ọ na-aga nke ọma na ezigbo mobile
Ntughari dabeere na ọgụrịrịrịrị na ama
Budata site na ntaneetị Koodu QR
Ọchịchọ Warhammer: Silver Tower
Developer: Na-agbanwe agbanwe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Nchọgharị Warhammer: Ala ndị agha na-atụgharị na Silver Tower na mmalite ụwa
Nke a bụ Samsung Galaxy Fit 2, smartband ọhụụ ọhụrụ
Etu esi ebufe foto gị site na Facebook gaa Dropbox